China 410 410s oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ rụpụta na ụlọ ọrụ | Huaxiao
410 igwe anaghị agba nchara mpempe akwụkwọ nwere nnukwu ike na magburu onwe machinability. Ọ ga-esi ike mgbe ọgwụgwọ ọgwụgwọ. A na-ejikarị ya eme ihe akụrụngwa maka ịcha ngwa na tebụl. Tụnyere 410 igwe anaghị agba nchara efere, 410S nwere ala carbon ọdịnaya na nwere mma corrosion eguzogide na formability.
Sino igwe anaghị agba nchara ikike banyere 410 410s oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ, 410 410s CRC
410S Otu ọkwa si na ọkwa mba dị iche iche
410S Chemical Component:
C：≤0.08，Na ：≤Ogbe Mn ：≤Ogbe ， S ：.0.03 ，P ：≤0.040, Cr ：11.5～13.5 ，Ni ：0.6 Max，
Ngwunye Ngwongwo 410s:
Ike ọdụdọ:> 415 Mpa
Ogologo (%):> 22%
Isi ike: <HRB89
410 Ihe odide yiri ya site na ọkwa mba dị iche iche
410 Chemical Component:
C：≤0.08-0.15 ，Na ：≤Ogbe Mn ：≤Ogbe ， S ：.0.03 ，P ：≤0.040, Cr ：11.5～13.5 ，Ni ：0,75 Max，
410 Ngwongwo Ngwongwo:
Ike ọdụdọ:> 450 Mpa
Isi ike: <HRB96
Igwe anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ Mkpa Ọnọdụ
Dịka a ga-atụle n'ikpeazụ, e mepụtala ọtụtụ azụmaahịa azụmaahịa dị iche iche iji mezuo ihe ịchọ mma nke ndị na-ese ụkpụrụ ụlọ. Dịka ọmụmaatụ, elu nwere ike igosipụta oke ma ọ bụ matte; ọ nwere ike ịbụ ihe na-egbu maramara, na-egbu maramara ma ọ bụ na-enwu enwu; ọ nwere ike na-acha, acha, plated ma ọ bụ etched na a ụkpụrụ n'elu nke igwe anaghị agba nchara, ma ọ bụ nwere ike dọtara, wdg Iji zute mmebe si dị iche iche chọrọ maka ọdịdị. Ọ dị mfe ịnọgide na-enwe elu ọnọdụ. Naanị ịsachasị oge ụfọdụ nwere ike wepu ájá. N'ihi ezigbo nguzogide corrosion, mmetọ elu ma ọ bụ mmetọ yiri nke a nwekwara ike wepụ ngwa ngwa.
Igwe anaghị agba nchara Ibé akwụkwọ ga-eme n'ọdịnihu
Ebe ọ bụ na igwe anaghị agba nchara nwere ọtụtụ ihe na-achọsi ike maka ihe eji arụ ụlọ, ọ ga-abụrịrị na ọ pụrụ iche na ọla, yana mmepe ya na-aga n'ihu. Iji mee ka igwe anaghị agba nchara rụọ ọrụ nke ọma na ngwa ọdịnala, ụdị dị ugbu a ka mma, ma a na-emepụta igwe anaghị agba ọhụụ iji mezuo iwu siri ike nke ngwa ngwa ụlọ. N'ihi na-aga n'ihu mma na mmepụta arụmọrụ na-aga n'ihu mma na mma, igwe anaghị agba nchara aghọwo otu n'ime ndị kasị na-eri-irè ihe ahọrọ ụkpụrụ ụlọ. Igwe anaghị agba nchara na-agwakọta arụmọrụ, ọdịdị na iji njirimara, yabụ igwe anaghị agba nchara ga-abụ otu n'ime ụlọ ụlọ kacha mma n'ụwa. China igwe anaghị agba nchara ahịa Network integrates na ọrụ n'elu ikpo okwu nke igwe anaghị agba nchara na igwe anaghị agba nchara ọkọnọ yinye ọmụma, site na oruru nke igwe anaghị agba nchara ụlọ ọrụ ọmụma, ụlọ ọrụ chọpụtara, ụlọ ọrụ management, igwe anaghị agba nchara imewe, igwe anaghị agba nchara forum, akụrụngwa ihe, ngosi ozi, igwe anaghị agba nchara ihe ọmụma, mbanye mbanye na ogidi ndị ọzọ, Nye ozi na ọrụ nyocha maka ụlọ ọrụ igwe anaghị agba nchara nke China maka ụlọ ọrụ ndị otu na ndị ọrụ gburugburu ụwa site na ozi kachasị ọhụrụ, nchekwa data, nchekwa data, nyocha na amụma, usoro nkwukọrịta, wdg.; nye ahia ahia maka igwe anaghị agba nchara ụlọ ọrụ na ụlọ ọrụ ndị yiri ya, chọta ohere azụmahịa; agbasa igwe anaghị agba nchara Culture na home live art, na-enye ihe ọmụma nke igwe anaghị agba nchara oriri.
Nke gara aga: 409 409L oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara
Osote: 430 oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara
410 410s oyi akpọrepu igwe anaghị agba nchara (0 ...